समाजसेवी बुद्धि बहादुरद्वारा ब्लड क्यान्सर पिडितलाई सहयोग हस्तान्तरण - Ratopress::रातो प्रेस
घनु गाहा, शितगंगा ।
अर्घाखाँची जिल्लाको शितगंगा नगरपालिका १० जन्म भई हाल कपिलबस्तु बस्ने बुद्धि बहादुर बलालले अर्घाखाँचीका ब्लड क्यान्सर पिडित तिल बहादुर बलाललाई आर्थिक सहयोग गरेका छ्न ।
वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा दुबईमा रहेका समाजसेवी बुद्धि बहादुरले ब्लड क्यान्सर पिडितको उपचारको लागि रोजगारकै सिलसिलामा दुबईमा भएका नेपालीहरु बाट ३४ हजार २ सय ६० रुपैयाँ आर्थिक सहयोग संकलन गरी पिडितलाई हस्तान्तरण गरेका छ्न ।
ब्लड क्यान्सर पिडित शितगंगा नगरपालिका १० हर्रे काठेखोला निवासी पदम बहादुर बलालका जेठो छोरा हुन् । उनको २८ वर्षिय जेठो छोरा तिल बहादुर बलालको अहिले चितवन स्थित भरतपुर क्यान्सर अस्पतालमा उपचार भईरहेको छ । उनी एक सामान्य परिवारमा हुर्केका बलाले खेतीपाती गरी परिवार पाल्दै आएका थिए । बलालका हाल १ छोरा र १ छोरी छन् ।
ब्लड क्यान्सर रोगको कारण मृत्युसँग लडिरहेका बलाललाई थप उपचारमा रकम अभाव भएपछि उनको परिवार अहिले चिन्तित बनेको छ । उपचार गराउन ठुलो रकमको आवश्यकता परेपछि उनको परिवारले सबैसँग सहयोगको अपिल गरेको छ ।
हालसम्म ५ लाख भन्दा बढी खर्च भई सकेको र अझै १० देखि १५ लाखसम्म खर्च हुने भन्दै रकम संकलन जारी राख्न अस्पतालले पूर्व सूचना गराएको परिवार स्रोतले जनाएको छ ।
उपचार खर्चमा सहयोग गर्न चाहने महानुभावले पिडित तिल बहादुर बलालको मुक्तिनाथ विकास बैंकको
खाता नं. 00620100215992000001 मा आर्थिक सहयोग गर्न सकिनेछ । साथै थप जानकारीको लागि पिडित तिल बहादुर बलालको नम्बर 9843222418, पिडितको बुवा पदम ब. बलालको नम्बर 9867456776, अभियान संयोजक घनु गाहाको नम्बर 9844787266 तथा रातोप्रेस मिडियाको नम्बर 9857014148 मा सम्पर्क गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ ।